ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကြည်းတပ် ဦးစီးချုပ် GENERAL AZIZ AHMED, BSP, BGBM, PBGM, BGBMS, PSC, G ဦးဆောင်သော ကိုယ်စား လှယ် အဖွဲ့ ရန်ကုန်မြို့ သို့ရောက်ရှိ | cincds
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကြည်းတပ် ဦးစီးချုပ် GENERAL AZIZ AHMED, BSP, BGBM, PBGM, BGBMS, PSC, G ဦးဆောင်သော ကိုယ်စား လှယ် အဖွဲ့ ရန်ကုန်မြို့ သို့ရောက်ရှိ
ရန်ကုန် ဒီဇင်ဘာ ၈
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကြည်းတပ် ဦးစီးချုပ် General Aziz Ahmed, BSP, BGBM, PBGM, BGBMS, psc, G ဦးဆောင်သော ကိုယ်စား လှယ် အဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက လေကြောင်းခရီးဖြင့် ရန်ကုန် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ရောက် ရှိကြ သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကြည်းတပ် ဦးစီးချုပ် General Aziz Ahmed, BSP, BGBM, PBGM, BGBMS, psc, G ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ရန်ကုန်တိုင်းစစ် ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် သက်ပုံနှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr.ManjurulKarim Khan Chowdhury ၊ စစ်သံမှူး Brig. Gen. Mr. RashedulMannan နှင့်တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင် ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ ကွညျးတပျ ဦးစီးခြုပျ GENERAL AZIZ AHMED, BSP, BGBM, PBGM, BGBMS, PSC, G ဦးဆောငျသော ကိုယျစား လှယျ အဖှဲ့ ရနျကုနျမွို့ သို့ ရောကျရှိ
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ ကွညျးတပျ ဦးစီးခြုပျ General Aziz Ahmed, BSP, BGBM, PBGM, BGBMS, psc, G ဦးဆောငျသော ကိုယျစား လှယျ အဖှဲ့သညျ ယနနေံ့နကျပိုငျးက လကွေောငျးခရီးဖွငျ့ ရနျကုနျ အပွညျပွညျ ဆိုငျရာ လဆေိပျသို့ ရောကျ ရှိကွ သညျ။
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ ကွညျးတပျ ဦးစီးခြုပျ General Aziz Ahmed, BSP, BGBM, PBGM, BGBMS, psc, G ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျ အဖှဲ့အား ရနျကုနျတိုငျးစဈ ဌာနခြုပျ တိုငျးမှူး ဗိုလျခြုပျ သကျပုံနှငျ့ တပျမတျော အရာရှိကွီးမြား၊ မွနျမာနိုငျငံ ဆိုငျရာ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr.ManjurulKarim Khan Chowdhury ၊ စဈသံမှူး Brig. Gen. Mr. RashedulMannan နှငျ့တာဝနျရှိသူမြားက လဆေိပျတှငျ ကွိုဆို နှုတျဆကျခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။